အသက် 100 အရွယ် အဘိုးအိုကျူးလွန်မိတဲ့ ယာဥ်တိုက်မှု - JAPO Japanese News
ကြာ 31 Oct 2019, 10:04 မနက်
နိအိဂတခရိုင်က လူသွားလမ်းတစ်ခုပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ အသက် 30 အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးကို လူသွားလမ်းပေါ် အရှိန်နဲ့ကျော်တက်လာတဲ့ ကားတစ်စီးက လွင့်စင်သွားတဲ့အထိ တိုက်လိုက်မိပါတယ်။
အမျိုးသားရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကျိုးသွားပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ အသက်အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ စိတ်မကောင်းပေမယ့် ဒါဟာ ဂျပန်မှာဖြစ်နေကျ ကိစ္စတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်က ပိုဆိုးတာပေ့ါနော်။
ယာဥ်မောင်းက အသက် 100 ရှိတဲ့ အမျိုးသားဆိုပါလား
ဟုတ်ပါတယ် ရဲတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းတော့ အဘိုးအိုက “ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ ကားကပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်နေပါပြီ” လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေ တိုးပွားလျက်ရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ အဘိုးအဘွားတွေ ယာဥ်မောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ယာဥ်မတော်တဆမှုတွေလည်း တိုးပွားလျက်ရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်သန်မာမှု လျော့နည်းလာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်း နှေးလာတယ်၊ မှားယွင်းဆုံးဖြတ်မိတယ် ဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခံရတဲ့သူအတွက်ကတော့ “မလွှဲမရှောင်သာလို့ပါ” ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ယာဥ်မောင်းလို့မရအောင် လိုင်စင်ပြန်အပ်နှံဖို့ အမြဲသတိပေးနှိုးဆော်လေ့ရှိပေမယ့် လက်ရှိမှာ အတင်းအကြပ်လုပ်လို့မရသေးတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နယ်မှာနေတဲ့ သူတွေအတွက် ကားမရှိရင်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
အဲဒီအတွက် အသက် 70 ကျော်လောက်ကစပြီး လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းကို တင်းကြပ်စွာစိစစ်လေ့ရှိပါတယ်။ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတို့ကို စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဆောင်ပေမယ့်လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားရတဲ့ ယာဥ်မတော်တဆမှုတွေက လျော့ကျမသွားပဲ တိုးမြဲတိုးလျက်ရှိပါတယ်။
သူတို့တွေအနေနဲ့လည်း မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ ရည်ရွယ်ပြီးတိုက်တာ၊ အရက်သောက်ထားလို့ တိုက်မိတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကားမရှိရင် အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာလို့ရပေမယ့် ဖြေရှင်းနေတဲ့စီမံချက်က မအောင်မြင်သေးတဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလိုအလျောက်ကားမောင်းနိုင်မယ့်စနစ်က တွင်ကျယ်စွာ အောင်မြင်လာဖို့ အားလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ Motor sports (Drift)
ဇိမ်ခံဘက်စ်ကားတွေကို ယာဥ်မောင်းတွေက ဘယ်လိုမောင်းလဲဆိုတဲ့ လျို့ဝှက်ချက် !
50ccနဲ့ တစ်နာရီကို 200 ကီလိုမီတာမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်!
လက် ချောင်း ၇ ချောင်းနဲ့ တီးနိုင်တဲ့ စန္ဒယားတီးသူ
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ချင်ရင် ဒီ うどん ( Udon ) နဲ့အိပ်ပါ !
တရားမဝင်ပေမယ့် ဖမ်းလို့မရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူတို့ရဲ့ Con Café လုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲ ?